👉 कोरोना व्यवस्थापनका राम्रा र नराम्रा पक्षः कर्णालीको आँखी-झ्यालबाट • Health News Nepal
✍️डा. के.एन. पौडेल, वरिष्ठ कन्सलटेन्ट फिजिसियन प्रदेश अस्पताल सुर्खेत
कोरोनाको दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेर पनि लगभग ओरालो लागेको अवस्था रहेको छ । भ्याक्सीन उपलब्धतामा कठिनाई , कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, भारत र चीन जस्ता विशाल देशहरुको सामीप्यता र विदेशीएका अनगिन्ती दाजु भाईहरु – यी र अरु कारणहरुले निश्चय नै हाम्रो देश कोरोना र यस्तै अरु संक्रामक रोगहरूको अनगिन्ति लहरहरुको लागी उच्च जोखीममा छ। यही प्रसङ्गमा रहेर कुरा गर्दा हामीले गरेका राम्रा नराम्रा कामहरुको विश्लेषण बिना कुनै पनि पूर्वतयारीले पूर्णता पाउन सक्दैन।
दोस्रो लहर र कर्णालीको कथा
कुनै पनि देशको स्वास्थ्य अवस्थाको तथ्य चित्र नियाल्न त्यो देशको सबै भन्दा दुर्गम भेगमा जानुपर्छ। स्वास्थ्य क्षत्रको कमजोरी केलाउन र सुधार गर्न त्यो भन्दा उत्तम उपाय अरु हुन सक्दैन । त्यसैले कर्णालीको कोरोना व्यवस्थापनमा गरिएका कमजोरीहरुको मूल्याकंन राष्ट्रिय स्तरमै अझै गौण भएर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लकडाउन भएको डेढ महिना दिन बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा दैनिक जस्तो हजारौं नेपाली मजदूरहरू भारतबाट फर्किरहेका छन् । नाकामै यथासक्य परीक्षण र यथोचित आईसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापन गर्न नसकेको कथा पहिलो लहर देखि दोस्रो या तेस्रो लहर सम्म आइपुग्दा पनि समस्याकै रुपमा मात्र रहेको छ। लामो र खुल्ला नाकालाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुको फाईदा स्वास्थ्य लगायत अरु क्षेत्रमा पनि निश्चय नै पर्नेछ।
भारतमा दैनिक लाखौ संक्रमित र हजारौ मृत्यु भइसक्दा पनि हामी नेपालमा कोरोना आएन भनेर ढुकेर मात्र बस्यौ। यो कुर्ने क्रममा न जनस्वास्थ्य मापदण्ड सुधार तर्फ लाग्यौँ, न त अस्पतालको स्तरोन्नती तर्फ । जब पर्यो राती, तब बूढी ताती भने जस्तै बिरामीको चाप बढीसके पछि र अक्सीजन लगायतका साधन स्रोतको चरम अभाव भईसकेपछि मात्र हठातमा केही कदमहरू चाल्यौं । यी अल्पकालीन योजनाहरुले देशको स्वास्थय छ्यत्रमा कस्तो दीर्घकालीन मार्गचित्र देला? जो कसैले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ ।
जनशक्तिको कमजोर व्यवस्थापन
स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभाव कर्णाली प्रदेशको मात्र हैन की समग्र नेपालकै पुरानो रोगको रूपमा रहेको छ। एकातीर वर्षौ पुरानो दरबन्दीको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्न नसकेर स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी अपुग देखिन्छ भने अर्को तर्फ नर्सिङ, हेल्थ असिस्टेन्ट जस्ता जनशक्ती काम नपाएर खाली बसेको या निजी संस्थामा अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक काम गरिरहेको देखिन्छ। स्थाई कर्मचारीकै हाराहारीमा करारमा कर्मचारी भर्ना लिएर काम गराउदा समेत अस्पताललाई भार थेग्न गाह्रो परेको छ। यति सम्म हुँदा पनि कर्मचारी दरवन्दी थप्न कसैको उचित नजर परेको देखिंदैन ।
समग्रमा भन्नुपर्दा स्रोत साधन र जनशक्ती अभावको गहिरो खाडलमा पहिल्यैबाट समस्या खेपिरहेको कर्णाली प्रदेश प्रतिको राज्यको उदासिनतालिई उदाङ्गो पारिदिएको छ कोरोना कहरले । वर्षेपिच्छे झाडापखाला र कुपोषणको चपेटालाई सम्हाल्न धौ-धौ परिरहेको कर्णाली प्रदेश लाई कोरोना बज्रपात भएकै छ । गतिलो पाठ सिकेर चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिइनेछ या छैन, यो समयले छिटै नै बताउनेछ हामी सबैलाई ।
महामारीसंगै देखिएको आशाको किरण
प्रविधि र स्वास्थ्य सेवालाई एकदमै अब्बल बनाएका देशहरुलाई समेत कोरोनाले घुडां टेकायो। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कोरोना संक्रमणलाई नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशले तुलनात्मक रुपमा कमै मानविय क्षति वेहोरेर परास्त गर्यो । महामारी दोस्रोपटक सम्म ढोकामा आइपुग्दा हामीले चालेका केही कदमहरुले हामीलाई केही बलियो बनाएको छ र अगाडी बढ्न उत्प्रेरित पनि गरेको छ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडी बढ्दै यिनै कदमहरूलाई अझ परिष्कृत गर्न सक्यौं भने पक्कै नै हाम्रो देशको स्वास्थय प्रणालीलाई कायापलट गराउन सकिन्छ ।
स्थानिय तहको अग्रसरता र स्वास्थ्य क्षेत्रसङ्ग उहाँहरुको सहकार्य यो महामारी विरुद्धको युद्धमा निर्णायक अस्त्रको रुपमा रह्यो । जिम्मेवारीबोधका साथसाथै उचित प्राविधिक सहयोग सहित स्थानीय निकायको भूमिकालाई विस्तार गर्न सकियो भने जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिबाट पनि पार पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सुर्खेत लगायत धेरै ठाउको कोभिड व्यवस्थापनले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारी अस्पतालको भूमिकालाई आजसम्म जसरी नजरअन्दाज गराउने काम विभिन्न निकाय, निजि स्वास्थय संस्था र स्वयं जनमानस बाटै भईरहेको थियो, कोरोना कहरले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। सरकारी स्वास्थ्यकर्मी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुले डटेर दिएको सेवा र निर्विकल्प रुपमा वहन गरेको जिम्मेवारी केही त्रुटीहरु बाहेक स्वागत योग्य नै छ ।
छोटकरीमा भन्नु पर्दा – चाहिने त सरकारी अस्पताल नै रैछ – भन्ने सोचाई जनता र सम्बन्धित सबै निकायमा पार्न कोरोना कहरले एक गतिलो भूमिका खेलेको छ । आई.सि.यु, एच्.डि.यु, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र बेड विस्तारले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाले एक छलाङ ल्याइदेको छ; यसको उचित व्यवस्थापन र स्तरोन्नती गर्न सक्यौं भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली निश्चय नै सुधार हुनेछ।